मन्त्रालयमा अधिकार राखेर प्राधिकरण स्वायत्त हुँदैन
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
नेपाल इन्स्योरेन्सको विकास अधिकृतबाट बिमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कुमारबहादुर खत्री पछिल्लो समयमा अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । बिमा क्षेत्रमा करिब २५ वर्ष बिताइसकेका खत्रीले यसअघि तत्कालिन एनबी इन्स्योरेन्स तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा समेत जिम्मेवार तहमा रहेर काम गरिसकेका छन् । व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका खत्री गत जेठदेखि मात्र अजोड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा नियुक्त भएका हुन । बिमा क्षेत्रमा लामो समय बिताइसकेका खत्री अनुभवी विमकको रूपमा पनि चिनिन्छन् । बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले नै आफ्ना पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको बिमा गरेर सुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । बिमा गर्ने क्रम बढेको भए पनि बिमा गर्न अभ्यस्त नभएकाले पनि नेपाली बिमा बजार साघुँरो देखिएको खत्रीको विश्लेषण छ । अनिवार्य गरिएकोभन्दा अन्य क्षेत्रको बिमा गर्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारण उत्साहित नभएको उनी बताउँछन् । बिमा गरेको खण्डमा आफ्नै सम्पत्तिको हुन सक्ने नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री छिटो छरितो प्रक्रियामा बिमा सेवा प्रदान गर्ने योजनामा रहेको बताउने खत्रीसँग समग्र बिमा क्षेत्रका बारेका कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समयमा संसद्मा प्रस्तुत भएको बिमा विधेयकले परिकल्पना गरेको नियामक निकाय तपाईंहरूले सोचेजस्तै हुने देख्नुहुन्छ ?
विधेयकमा हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । हालको संस्थागत संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने भएपछि बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त, सवल र पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हो । बिमा विधेयकलाई हेर्दा प्राधिकरणका धेरै अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको छ । यो राम्रो होइन । बिमा प्राधिकरण बनाइसकेपछि स्वायत्त निकाय नै हुनुपर्छ । बिमा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्णअधिकार सम्पन्न नियामक निकाय हुनुपर्छ । प्राधिकरणले गर्र्ने काममा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने भएपछि बजार विकास काममा ढिलासुस्ती आउँछ ।
विधेयकमा प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यतामा उच्च व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले बिमा प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाइ छनोट गर्ने दायरा साँघुरो बनाइएको हो कि भन्ने लाग्छ । हिजो बिमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने थियो । यो व्यवस्थाले योग्य र क्षमतावान व्यक्ति नआउने सम्भावना पनि देखियो । त्यसका साथै विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सन्दर्भमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेको भए हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । हामीले जुनियर तहको कर्मचारीलाई अनुभव माग्ने तर, संस्थाको नेतृत्व लिने व्यक्ति कै पर्याप्त अनुभवको जरुरी नगर्दा यो क्षेत्रको विकास हुने देखिँदैन ।
विधेयकमा माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर सेवा दिन सकिन्छ भनिएको छ । यस सन्दर्भमा बिमकहरूले बिमा कम्पनीहरू र माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्ने काम एउटै हुने भएपछि यो उपयुक्त होइन पनि भनेका छन् नि ?
मलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी नै आउनु हुँदैन भन्ने लाग्दैन । अहिले हामी निर्जिवन बिमा कम्पनी मात्र २० वटा भए पनि दूरदराजमा गएर सानो आकारको बिमा गर्न सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले पनि माइक्रो इन्स्योरेन्सको परिकल्पना गरिएको विषय ठीकै हो । अहिले माइक्रो इन्स्योरेन्स भनेर २ लाखसम्मको झुपडी भनेर भनेको पनि छ । तर, अहिले त्यो सिमालाई बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका साथै स्वास्थ्य बिमा ३५ हजार रूपैयाँसम्म भनेको छ । एक्सिडेण्टल २ लाखसम्म भनेको छ । त्यस्तै १ लाख ५० हजारसम्मको गाईभैंसी बिमा भनेको छ । कृषि बिमामा ५० हजार रूपैयाँसम्मको भनेको छ । यी क्षेत्रलाई बिमा गर्नु पर्दा कम्पनी आफैं गएर काम गर्न सक्दैन । त्यसैले माइक्रो इन्स्योरेन्स जरुरी नै देखिन्छ । माइक्रो इन्स्योरेन्सका कम्पनीहरू खोलिनुपर्छ । माइक्रो लेभलमा गएर काम गर्ने उद्देश्य राखेर स्थापना भएपछि माइक्रो इन्स्योरेन्सको विकास हुन्छ । यो आउनु हुँदैन भन्ने नहुनु पर्ने हो । एक पटक नेपाल सरकार, नेपाल रि तथा सबै बिमा कम्पनीहरूले संयुक्तरूपमा लगानी गरेर खोल्ने भन्ने पनि कुरा आएको थियो । माइक्रो इन्स्योरेन्स आएको अवस्थामा बिमा कम्पनीको व्यवसायमा खासै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । माइक्रो बिमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्छ । बिमा कम्पनीले ओभरअल बिजनेस गर्छन् । अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूले बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने काम त गर्दैनन् । बिमा कम्पनी र माइक्रो बिमा कम्पनीको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै हो भन्ने लाग्छ । यसमा दुविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । अहिले कृषि तथा पशुको बिमा गर्दा बिमा कम्पनीहरूले पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाइ नै प्रयोग गरेका छन् । त्यसकारणले माइक्रो इन्स्योरेन्सको सन्दर्भमा पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसमा समस्या छैन । माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल रिसँग गएर पुनर्बिमा सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने छैन ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या मात्र २० पुगेको अवस्थामा पनि सरकार आफैंले स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गरेको छ । सरकारको यो कदमले तपाईंहरूको पहिचान नै संकटमा देखियो नि ?
यो विषयलाई धेरै नकारात्मक भएर पनि हेर्नु भएन । सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा आलोचना मात्र गर्ने भन्दा पनि काम पनि त सुरु भएको छ भनेर हेर्दा राम्रो होला । यसले सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश नै दिएको छ । यसले समग्र बिमा क्षेत्रको सन्दर्भमा समेत बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार भएको छ । तर, यो नेपाल सरकारले गर्ने काम चाहिँ होइन । भोलिका दिन त्यो काम पाउने भनेको बिमा कम्पनीले नै हो । सरकारी तहमा नीति निर्माण गर्दा कतिपय अवस्थामा स्पष्ट कुरा नभएको हुनाले पनि सरकार आफैंले सुरु गरेको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यस्ता बिमा योजना सरकारले चलाएर चल्दैन । सरकारले नै बिमा गराएपछि बिमाप्रति जनविश्वास र चेतना बढेको हुनाले बिमा कम्पनीलाई पनि स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रका अन्य पक्षको पनि बिमा गराउन उत्साह जागेको छ । अहिले स्वास्थ्य बिमा गर्नेलाई कर छुट पनि दिइएको छ । हाल स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्तिले बार्षिक २० हजार रूपैयाँ खर्च देखाउन पाउने व्यवस्था छ । भोलिका दिनमा बिमा कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा भनेको ठूलो कार्यक्षेत्र पनि हो । बिमा भनेको सानो–सानो प्रिमियम संकलन गरेर समस्या परेका समयमा बिमितलाई क्षतिपूर्ति दिने हो । स्वास्थ्य बिमा भनेको उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर गर्ने हो । सरकारले नै स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले यसको आकार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
बिमा व्यावसायको अधिकांश हिस्सा मोटर बिमाले ओगट्दा यस क्षेत्रमा विविधता आउन नसकेको देखियो । यसले त बिमकहरूको क्षमतामा नै प्रश्न खडा ग-यो नि ?
मोटर बिमाको आकार ठूलो भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो । त्यसका साथै तेस्रो पक्ष बिमा गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । मोटर बिमामा जोखिम पनि उच्च छ । त्यसैले पनि मानिसले जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोज्छ । मोटर बिमामा चाहेर कुनै पनि व्यक्तिले जोखिम बहन गर्दैन । तर, मोटर बिमाको अलवा अन्य क्षेत्रको बिमा गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बिमाको आकार पनि निकै ठूलो भएको छ । नयाँ ऐन पास भएपछि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्था हुँदैछ । यसले आगामी दिनमा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छुट्टै कम्पनी आउँछ । त्यो कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिने सन्दर्भमा सबै पक्षलाइ हेर्ने भएकाले पनि झनै सहज हुने देखिन्छ । दाबी भुक्तानी दिन योग्य हो होइन, कति भुक्तानी दिनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा यसले काम गर्छ । अहिले हामी क्यास लेस सिस्टममा जाँदै छौं । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको प्रडक्टले कभर गर्ने पैसा कम्पनी आफैंले बिमितले उपचार गरेको हस्पिटललाई नै भुक्तानी दिन्छ । यसका लागि छिट्टै एउटा सफ्टवयर पनि विकास हुँदै छ । यसले बिमा गरेको व्यक्तिको नाम इन्ट्रि गर्ने बित्तिकै कुनै पनि हस्पिटल, व्यक्ति तथा बिमा कम्पनीले हेर्न सक्ने प्रणालीको विकास हुन्छ । आगामी दिनमा मोटर बिमावाहेर अन्य बिमा योजना पनि बढ्दै छन् ।
२०७२ सालमा भूकम्प आएपछि बिमा व्यवसाय बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सो अनुसार विस्तार हुन सकेन । अजोड इन्स्योरेन्स भर्खर मात्र सुरु भएको कम्पनी हो । बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी भए पनि बढ्दो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई स्थापित गर्न कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पमा नसोचेको धेरै क्षति भयो । तर, त्यो भूकम्पका कारण भएको कुल नोक्सानीमा करिब १० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पत्तिको बिमा भएको पाइएन । नेपाल सरकारको कुनै पनि सम्पत्तिको बिमा भएको थिएन । त्यसमा पनि बिमा भएका धेरै केस अन्डर इन्स्योरेन्स थिए । सो समयमा नेपाली बिमा क्षेत्रले करिब १६ अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।
बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा छ । तर, अभ्यस्त नभएकाले समस्या देखिएको हो । बिमा गर्ने बानी छैन । वर्षको एक पटक स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी छ । वर्षमा १० देखि १२ हजार रूपैयाँ तिर्न नसक्ने पनि होइन । तर पनि बिमा गर्दैनौं । सर्वसाधरणलाई बिमा गर्ने बानीको विकास गर्न नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही काम छन् । बिमा कम्पनीले बजारमा मार्केटिङ गर्ने जनचेतना फैलाउने काम गर्छौं । तर, सरकारले मोटर बिमा जस्तै अन्य बिमा पनि अनिवार्य गरेर अघि बढ्न सक्छ । त्यस्तो गरेको खण्डमा सर्वसाधारणमा बिमा गर्ने बानीको विकास हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले नै स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको छ । यसले पनि बिमा बजार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले हामी सम्पत्ति बिमा भनेर कम्प्रिह्यान्सिभ पोलिसीमा गएको अवस्था छ । यसमा नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पत्ति पनि अनिवार्य बिमा गर्ने र सर्वसाधारणले मालपोत तिर्दा, नक्सापास गर्दा, सम्पत्ति कर तिर्दा बिमा अनिवार्य गरेको खण्डमा विपत्ति आएको खण्डमा समग्र देशको नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ । अझै अहिले सम्पत्ति बिमाले घर बिमाको शुल्क घटाएर १ करोडको घर ४ हजार रूपैयाँले मात्र गर्न सकिन्छ । यसमा हुलदंगा आतंकबाहेकका सबै जोखिमलाई समेट्छ । यसो गरेको खण्डमा बिमा बजार ठूलो हुने तथा नेपाल सरकारलाई यो क्षेत्रबाट आउने राजस्व पनि वढ्छ । त्यति मात्र नभै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत योगदान पुग्छ । सरकारले यती गरेको खण्डमा विपत्ति आएको अवस्था सर्वसाधारण सडकमा आउन पर्दैन । बिमा कम्पनीहरूको तहबाट सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । आगामी दिनमा सरकारले गर्छ भन्नेमा आशावादी छौं । सरकारले मोटर तथा स्वास्थ्य बिमालाई जसरी प्राथमिकता दिएको छ, यसैगरी सम्पत्तिलाई पनि महत्व दिन्छ भन्नेमा छौं ।
प्रतिस्पर्धी बजारमा अजोड इन्स्योरेन्स कसरी उपस्थिति जनाउँछ भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रविधिमैत्री छिटो छरितो सेवा दिने गरी आएका छौं । हामीले दाबी भुक्तानीको समयावधी छोट्याउने तथा ग्राहकलाई सहज हुने तवरबाट बिमा सेवा प्रदान गर्ने योजनामा छौं ।
बिमा बजारमा फेक क्लेमका समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने के गर्नु पर्छ ?
बिमा क्षेत्रमा हुने फेक क्लेमलाई मेटाउनै भने सकिँदैन । केही कमी भने गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बिमा गर्ने भनेको पूर्ण विश्वासको सिद्धान्तभित्र रहेर काम गर्ने हो । तर पनि त्यसमा नैतिक अवरोध बढेको अवस्था छ । त्यसका लागि बिमा गर्ने चिजको राम्रो विश्लेषण गरेर मात्र पोलिसी बिक्री गरेको खण्डमा समस्या आउँदैन । एउटा सम्पत्तीको बहुबिमा गर्ने समस्या पनि देखिएको छ । बिमा कम्पनीबीच अन्तरिक सम्पर्क हुने हो भने त्यो समस्या पनि हट्छ । जीवन बिमाको सन्दर्भमा बहुकम्पनी मार्फत पोलिसी खरिद गरेको खण्डमा समस्या पर्दा सबै कम्पनीबाट भुक्तानी पाउँछ । तर, निर्जिवनको सन्दर्भमा निश्चित मूल्य हुने भएकाले सबै कम्पनीबाट भुक्तानी पाउने सम्भावना हुँदैन । त्यस्तो केसमा पोलिसी बिक्री गरेका कम्पनीले कुल नोक्सानीमा बराबर हिस्सा रहने गरी भुक्तानी दिने हो । त्यसका साथै कम्पनीको मार्केटिङ गर्ने व्यक्ति पनि इमानदार हुनुपर्छ । यती गरेको खण्डमा फेक क्लेम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
हामीले बिमा भनेको ठगी होइन भन्ने बुझाउने प्रयास गरिनै रहेका छौं । फेक क्लेमको सन्दर्भमा विगतमा भन्दा आज धेरै सुधार आएको छ । भोलिका दिन अझै सुधार होला । अहिले यातायात कार्यालयमा गएर हेर्ने हो भने अधिकांश कम्पनीले तेस्रो पक्ष बिमा गर्दा बिमा कम्पनीको अधिकारिक कार्यालय हुन्छ । त्यो कार्यालयमा पनि बिमा कम्पनीको प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ । विगत जस्तो हातले लेखेर होइन प्रिन्टेड पोलिसी मात्र बिक्री हुन्छ । एक पटक सिस्टममा इन्ट्रि भएपछि डिलिट गर्न सकिँदैन । यसले गर्दा गलत काम हुँदै गएको छ । विगतमा नक्कली पोलिसी बिक्री गर्ने काम हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अन्त्य भएको छ । यस सन्दर्भमा बिमा समितिले पनि गम्भीर भएर नियमन गरेको छ । आगामी दिन यो अझै व्यवस्थित हुने निश्चित छ । अजोड इन्स्योरेन्सले नै पनि करिब १२ स्थानमा यातायात कार्यलयसँग आफ्नो सिस्टमसहितको काउन्टर स्थापना गरेको छ ।
बिमितले दाबी गरेको समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो सुनिन्छ । बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानीमा सक्दो ढिलो गरौं भन्ने हुन्छ कि के हो ?
बिमा कम्पनीले भोलिको दिनलाई सोचेर व्यवसाय गर्ने हो भने पोलिसी बिक्रीपछिको सेवालाई नै ध्यान दिनुपर्छ । बिमा कम्पनीले पोलिसी नै बिक्री गर्ने हो । कागज बिक्री गरेर पैसा लिने हो । त्यसैले पनि पोलिसी बिक्रीपछिको सेवालाई धेरै महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । अहिले अजोड इन्स्योरेन्सको कुरा गर्नु हुन्छ भने २ लाख रूपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी फास्ट ट्रयाक भनेर अन द स्पट भुक्तानी दिने गरेका छौं । अहिलेसम्म करिब एक सय दाबी परेकोमा ६५ प्रतिशत भुक्तानी भइसकको छ । हाम्रो मार्केटिङ टुल्सको रूपमा पनि दाबी भुक्तानी रहेको छ । पूर्ण कागजातसहित आएको दाबीलाई हामी करिब एक घण्टाको अवधिमा चेक दिएर पठाउँछौ । ठूलो दाबी परेको अवस्थामा पनि पूर्ण कागजात भएको खण्डमा ३० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्ने निर्णय नै गरेका छौं ।
हामीले सूचना नै निकाली सर्भेअरको सर्टलिस्ट गर्छौं । त्यसका साथै कम्पनीले तोकेको समयमा काम सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधेर मात्र दिन्छौं । बिमा कम्पनीले सर्भेअरलाई निरन्तर फलो अप गरेको खण्डमा त्यो पक्षले चाहेर पनि दाबी भुक्तानी ढिलो हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले सर्भेअरको संख्या पनि बढेको छ । तर, त्यसमा कति जेनियून हुन् भन्ने हो । त्यस सन्दर्भमा बिमा कम्पनी चनाखो भएको खण्डमा समस्या आउँदैन । विगतमा जस्तो दाबी रोकेर अबका दिन बिमा व्यावसाय अघि बढ्छ भन्नु गतल हो ।
करिब २ दर्जन कम्पनीमध्ये अजोडमा नै बिमा गराउन आउनुपर्ने त्यस्तो विषेश सेवा के छ ?
अजोडमा युवा तथा अनुभवी व्यवस्थापन समूह छ । त्यसका साथै अजोडसँग जोडिएका प्रवद्र्धक पनि नेपालका परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसले पनि मार्केटिङ गर्न सहज छ । त्यसका साथै दाबी परेको समयमा पनि सहज भुक्तानी दिनसक्ने व्याकअप छ । अजोडमा आउने सर्वसाधारणले छिटो छरितोरूपमा प्रभावकारी सेवा लिन नै आउने हो । त्यसका साथै समयमा दाबी भुक्तानी पाउनका लागि पनि अजोड नै रोज्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा कम्पनी प्रतिबद्ध छ ।
हामीले प्रविधिमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रणाली वेव वेस हो । हामीले इन्टरनेट चल्ने ठाउँमा पोलिसी जारी गर्न सक्छौं । भोलिका दिनमा हामीले अनलाइन पोलिसी सेलिङका लागि काम गरिरहेका छौं । त्यसका साथै मार्केटिङ पनि अनलाइनमार्फत नै जाने तयारी गरेका छौं । अहिले हामीले परम्परागत शैलीमा काम गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । प्रविधिमैत्री भएकालेसेवा पनि छिटो र छरितो दिन सक्छौं ।
नयाँ कम्पनी भएकाले पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा नै छौं । आगामी फागुन १५ गतेभित्र २९ शाखा स्थापना गर्ने योजनामा छौं । त्यसका साथै जनशक्ति नियुक्ति तथा तालिमको पनि योजना छ । कम्पनीले आधार तयार गरिसकेकाले अब पूर्णरूपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा छौं । त्यसका साथै आगामी दिनमा बजार अध्ययन गरेर आवश्यकता देखिएका योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य छ ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास पनि सकिएको छ । यो अवधिसम्ममा कम्पनीको कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अजोड इन्स्योरेन्सले १२ करोड १३ लाख रूपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पँजी १ अर्ब भएकोमा संस्थापक समूहबाट करिब ७० करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी ३० करोड सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने योजना छ । संस्थापक समूहको पैसा कम्पनीले लगानी गरेको छ । यो अवधिमा १ करोड २३ लाख रूपैयाँ नाफा गरेका छौं । सो अवधिमा कम्पनीको सञ्चित कोषमा करिब ४ करोड पुगेको छ । कम्पनीका सबै वित्तीय सूचक उत्साहजनक नै छन् । एक वर्षको पूर्ण वासलात चाहिने भएकाले आगामी वर्षमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।